कोरोनाले सिकाएको शिक्षा - Aksharang
अनुभूति२०७७ श्रावाण २१ बुधबार
कोरोनाले सिकाएको शिक्षा
फूलको देहमा सुवास कसले भरिदियो ?
हिमालमा आभा कसले छर्किदियो ?
आँखाको नानीमा माया कसले रोपिदियो ?
जूनमा शीतलता कसले छरिदियो ?
देह जसलार्ई तिमी घृणा गर्छौ
देह जसलार्ई तिमी मरणशील छ भन्छौ
देह जसलार्ई तिमी नश्वर छ भन्छौ
देह जसलार्ई तिमी बल्ने त हो नि भन्छौ
तर नभुल तिमी यो देह भित्रै त छौ नि !
देह छ र त देवता छन् अनि
तिम्ले फेर्ने सास देहकै एक अनुच्छेद हो
तिम्ले गर्ने माया देहकै दौलत हो नि
फेरि किन भन्छौ नाशवान् छ यो देह ?
र घृणा गर्छौ यस देहलार्ई ।
यो देह भित्र नै छन् देवता पनि !!
अरू त के कुरा एकान्त पनि एक्लो छ !
आज रामको देह कहाँ जन्मिएको हो भन्ने विवाद छ
देहधारी जीवन एक्लो एउटा सत्य हो
एक देहदेखि अर्को देहलार्ई घृणा गर्ने समय होइन यो
तर खै समय किन यसरी उल्टो बगिरहेको छ ?
त्यसैले म एकान्तमा छु
चुपचाप छु, मौन छु, सबैदेखि पर छु
सबैबाट पर हुँदा आफूलार्ई बुझ्ने समय मिल्दोरहेछ
हिजोआज आफैँलार्ई माया गर्छु म । मैले आफूलाई बुझँे । धेरै बुझेँ । म देहभित्रको एउटा सलिल आत्मा हुँ । म देह पनि हुँ । म आत्मा पनि हुँ । देह एउटा आवरण हो । त्यो देहभित्र एउटा हीरा छ । त्यो हीरा आत्मा हो । म आत्मा पनि हँु, देह पनि हुँ । मेरो आत्मा बस्ने घर हो मेरो देह । मलार्ई देख्नेले आत्मा भनेर बोलाउँदैनन् । मेरो देहलाई बोलाउछन् । आत्मालार्ई कसैले देख्दैनन् । न यो जन्मेको देखे कसैले, न यो मरेको देखे कसैले । मेरो देहलाई लुगाले ढाकेजस्तै मेरो आत्मालार्ई मेरो देहले ढाकेको छ । देहलाई दुख्छ । आत्मालाई दुख्दैन । देह गल्छ । देह ढल्छ । देह परिवर्तन हुन्छ । देह घामपानी र अन्य ऋतुजस्तै परिवर्तनशील छ । देहलाई रोग भोक, शोकले विचलित पार्छ । तर यही देहभित्रको मेरो आत्मालाई कुनै रोगभोक र शोकले गलाउन ढलाउन सक्तैन ।
मैले म बुझ्नु भनेको म आत्मा हुनु हो । आत्मा निर्विकल्प सत्य हो । मेरो देह त अस्थायी हो । मेरो आत्मा मात्रै नित्य निरन्तर एउटा ॐ कारको आवाज हो, जो ब्रह्माण्डमा सदा ध्वनित, प्रध्वनित भैरहन्छ । मैले मेरो आत्मा र मैले मेरो देहबारेमा योभन्दा अगाडि कहिले सोच्न भ्याइन छु । आज कोरोना आयो । म एकान्त भए । अरू एकान्त भए । यस एकान्तले मलार्ई ‘म’ बारेमा चिन्तन गर्ने अवसर दिलाई ।
एकान्त नै ध्यान हो । एकान्त नै योग हो । एक्लो हुनु नै आत्मासँगको संवार्ता हो । मैले बोलाएँ आफँैलाई । मैले आफैँसँग कुरा गरँे । एक्लो हुनु नितान्त आफू हुनु पो रहेछ । मेरो उज्यालोको इन्द्रेणी म आफैँभित्र पो रहेछ । योभन्दा अगाडि मैले आफूलाई बाहिर खोज्थेँ । आजकल आफूलाई आफैँभित्र खोज्छु । आनन्द त आफूले आफैभित्र खोज्नुमै रहेछ । एक्लै–एक्लै आफै नदी भएर बहनुमा कति मजा ! । आफ्नै भँगालो आफ्नै झर्ना । आफ्नै शान्ति, आफ्नै शीतलता । आफ्नै लहर । आफ्नै किनारा । आफ्नै भुमरी आफ्नै सुसाइ । आफ्नै बगाइ । आफ्नै उत्फुल्लता । एक्लै–एक्लै एउटा शान्त नदी भएर बग्न थालेको छु म आजकाल । यो एक्लोमा अर्कै मजा, अर्कै शान्ति, अर्कै खोजी, अर्कै उज्यालो, अर्कै लहर, अर्कै प्रमोदिता, अर्कै आनन्द । मानिस आखिर एक्लै त हो नि । ऊ जतिसुकै फूर्ति गरोस् । ऊ जतिसुकै कुर्लियोस्, जतिसुकै उर्लियोस् । ऊ खुसीमा संसारको होला । ऊ हाँसोमा सबैमा बाँडिएला तर दुःखमा, आँसुमा, भोकमा र शोकमा शून्यमा एक्लो छ, निरीह छ । ऊ दुःखमा एक्लै–एक्लै त हो नि । एक्लो केवल, एक्लो त्यही निरीहिता हो मान्छेको सत्य भन्नू पनि । कति मजा छ एक्लोमा ।
म को हँु भनेर बुझ्ने अवसर मिलाइदिने कोरोनालार्ई मैले धन्य भनेको छु । सायद अरूलाई त चित्त नबुझ्ला । आज कति मान्छेलार्ई भीड केहो भन्ने कुरा पनि राम्ररी बुझाउन सफल भएको छ कोरोना । योभन्दा अगाडि कहिले फुर्सद मिलेन मलार्ई म के हुँ भनेर बुझ्न । मान्छे सधैँ भीडभाडमा छ । ऊ सधैँ हत्पतमा र बेफुर्सदीमा छ । ऊ एक्लो भएर कहिले सोचेन । सधैँ परतन्त्र भएर बाँचिरह्यो । त्यसैले कहिलेकाहीँ ऊ एकान्त खोज्छ ।
आज बिश्व कोरोना महामारीमा छ । एकान्तमा बस । आफूलाई खोज । आफूलाई बुझ । एकछिन शान्ति अनुभूति गर । अपलक मौनतामा हेर आफूभित्रको त्यो निर्मल नदी बगिरहेको छ भनेजस्तो लागिरहेको छ कसैले परबाट ।
आफूलाई सुन । अरूलाई त सदियौँदेखि सुन्दै आइरह्यौँ हामीले । अब केही दिन, केही महिना, केही समय निकालेर आफूभित्रको त्यो आफ्नो सरगमलाई सुन । आफैँभित्रको त्यो रामलाई सुन । आफूभित्रको त्यो बुद्धलार्ई सुन । आफूभित्रको त्यो महान् आत्माको सङ्गीतलाई सुन भनेको हो कसैले परबाट । नदी भएर बग्दाबग्दै ताल भएर थुनिनु जिन्दगी हो । फूल भएर रमाउँदारमाउँदै कुनै दिन चटक्क चुँडिनु हो जिन्दगी । आफ्नो गुञ्जन सुन्न नपाउँदानपाउँदै कतिखेर त्यो कोमल तार चँुडिन्छ । यो मौका हो आफूले आफैँलाई सुनिरहने । यो मौका हो आफूले आफैँलाई सम्झिरहने । यो मौका हो आफूले आफैँलाई पुजिरहने । यो कोरोनाको त्रासद समय हो, आफूभित्रको सुन्दर संसार फर्किएर हेर्ने । एक्लो सिर्फ एक्लोमा रमाएर त हेर झिलिमिली त त्यहीँ छ नि । भीडभाडमा रोग छ । भीडमा, हुलमा त हल्ला छ । हल्लामा तिमी आफू रहन्नौ । भीडमा त भिजिलान्ते मात्रै रमाउछ्न् ।
भीडमा नै हो महाभारत युद्ध भएको । भीडमा सत्य धर्मराउँछ । भीडमा शान्ति डगमगाउँछ । भीडमा भ्रम मात्रै जगजगाउँछ । भीडको चक्रव्यूहमा नै हो अभिमन्यूले हारेका । कृष्णले अपराधीहरूको भीडको अन्त्य गर्नलार्ई हो महाभारत रचेको । आफूलाई खोज्ने हो भने भीडमा होइन एकलासमा हो । आफूलाई भेट्ने हो भने एकान्तमा हो । आफूलाई बुझ्ने हो भने शान्तिमा हो । शान्ति र आरोग्यता एकान्तमा छ । एक्लो छ चाँदनी तर उज्यालो छ । एक्लो छ त्यो विराटस्वरूप श्रीसूर्य पनि । राम वनवास कुनै भीड खोज्न गएका थिएनन् । बुद्ध वनमा कुनै क्रान्ति गर्न गएका थिएनन् । उनी सिर्फ एकान्त खोज्न शान्ति, खोज्न गएका थिए । आज भीडको कोलाहलमय भ्रान्तिमा बाँचेको छ मनुष्य । त्यसैले निम्त्याएको छ कोरोना कहर । एक्लोमा आरोग्यता छ । एक्लोमा निर्मलता छ । एक्लोमा एकालाप छ । कुरा गर आफँैसित । कुरा गर एकान्तसित । एकान्तलार्ई नजिकबाट अनुभूत गरेर त हेर ।
हेर त तिमी हिँडिरहेको त्यो बाटो पनि त एक्लै त छ । उसले कहिले खोजेन अर्को बाटो आफूभित्र । हरू त अरु हुन् । हामी आफूलाई जब अरूमा मिसाउँछौ अनि आफ्नो निजत्वको त्यो निर्मलता पनि धमिलिन्छ । हिमालयबाट बहँदै आएको एउटा सङ्लो नदी जब सहर प्रवेश गर्छ, त्यहीँबाट सखाप हुन्छ उसको असीम अस्मिता । यही हो भीडमा मिसिनुको पीडा । यदि तिमी आफैँ आफ्नो सर्वश्व थियौ भने एक्लोमा थियौ । एक्लो यात्रा गर्नुछ तिमीले आफ्नै पृथ्वी मनको । त्यो मीठो यात्रा तिमीले एक्लैले तय गर्नुछ । भीडको यात्रा त एउटा भ्रम हो । कहीँ पनि पुगिँदैन । त्यत्रो सगरमाथाको यात्रामा सयौँ हुन्छन् तर व्यक्ति सगरमाथाको शिरमा जब पुग्छ नि त्यहाँ व्यक्ति एक्लो हुनुमा प्रमोदित महसुस गर्छ । त्यही प्रशान्ति हो एक्लो प्रशान्ति मनुष्यले खोज्ने पनि । यस कोरोनाले हामीलार्ई एक्लो हुन सिकायो । सम्भावना नहोला सधैँ एक्लो रहन । कुनै दिन समाज अनि ती आफ्ना पनि चाहिएलान् । तर यति वेलाको समयले तिमी एक्लो रहनुमा नै तिम्रो आरोग्यताको अचुक ओखती हो भन्ने सङ्केत गरिरहेको छ ।
तिमी एक्लो हुनुलाई निरासताको सङ्केत भन्छ्यौ तर म भन्छु एक्लो हुनु स्वयम् जलेर अरूलाई उज्यालो देखाउने दियो हुनु हो ।
दियोसँग अरू को जल्यो र खै आजसम्म ? फूलसँग कहिले झर्यो र काडा खै ? एक्लै झर्छ फूल गलेपछि भैँमा तर फूल कहिले भौँतारिएन । एक्लो फूल । एक्लो जून । एक्लो चाँदनी । एक्लो आकाश । एक्लो क्षितिज । एक्लो सूर्य । एक्लै छ हिमाल । नदीहरू एक्लाएक्लै छन् । एक्लै बगिरहेको देख्छु अनन्तदेखि ।
समय पनि त एक्लै छ नि ! परपर बाटोमुनि उभिएर एउटा पीपलको बोट बर्षौंदेखि मलार्ई गाउँ जाँदा स्वागत् गरिरहेको छ । त्यसको एकान्त देख्दा मलार्ई खुसी लाग्छ किनभने मजस्तै त्यो पीपल पनि एक्लैमा रमाइरहेछ । रमाइलोको लागि यदि भीड नै चाहिने भए नदी उहिले नै सुकिसक्थ्यो होला । बारीमा उभिएका बोटहरू सबै ढलिसक्थे होलान् । बाटोहरू हराइसक्थे होलान् । म अगाडिको एउटा लाटो पहाड सधैँ एक्लै देख्छु । त्यसले गाएको गीत एकान्तमा सुनेको छु मैले । म त्यो पहाड हेरेर निदाउँछु । उसको एकान्त मलार्ई मनपर्छ । चकमन्न जङ्गलको बीचबाट उठेको एकान्त सुसेली कहिलेकाहीँ बाटो हिँड्दा सुन्न पाइन्छ । मौनता पनि स्वयंमै आवाज हो ।
मियो एक्लै उभिएको छ खेतमा दस गोरुको बीचमा तर ! हेर त ती गोरुहरू त्यही मियोवरिपरि घुमेका छन् र धानका गेडाहरू झारिरहेछन् । सूर्य पनि त एक्लै छ । तर हेर लाखौँ ग्रह त्यसकै वरिपरि घुमिरहेछन् । विशाल वृक्षको बीउ एक्लो उम्रनु पर्छ पृथ्वीमा । लहलहाउने फूलका कलेवर स्वयं एक्लै छन् । पातहरू पनि एक्लै छन् । खै कोसँग मागे र तिनले हरियो सापटी ?
सापट त भीडले माग्छ । उधारो त भीडले खान्छ किनभने भीड महाभारतको युद्ध हो । खै कसले जित्यो त्यो युद्ध ? कृष्णले पनि हारे, कौरवले पनि हारे, पाण्डवहरूले पनि हारे, सबैले हारे । केवल समयले जित्यो । भनिन्छ त्यो युद्धमा सत्यले जित्यो तर खै कहाँ छ र सत्य ? कसले देख्यो सत्य । सत्य पनि एक्लो छ ।
एक्लोहरूलाई देखिँदैन तर दिग्विजय एक्लोले गर्छ । सत्य सापेक्ष हुन्छ र आफूले खोजेको सत्य जहाँ पनि पाइन्छ । सत्यको स्वतन्त्र सत्ता हुँदैन । मानिसले सत्य आफैँ निर्माण गर्छन् । सत्य त सत्य हो तर जब सत्यलार्ई सबैले आ–आफ्नो निहित स्वार्थसँग जोडे अनि सत्य पनि रुन्छ मानिसको आँसुसँग पग्लिदिन्छ ।
सत्य पनि स्वयम् एक्लो छ । हिजोदेखि आजसम्म सत्यले भीड रोजेन । भीडमा असत् असत्य हुन्छ । मानिस भीडमा पशु बन्छ । भीडमा एउटा नाङ्गियो भने सबैलार्ई नाङ्गिन कुनै डर हुँदैन । तिमी एक्लो हुनुलार्ई बथानबाट छोडिएको चरी भन्छ्यौ तर म त्यसैलार्ई बुलबुल भन्छु । भीड दुखेको देखेको छु मैले तर एकान्त कहिले दुखेको देखिन । एक्लो उभिएको पहाडलार्ई हेर्छु कति शान्त बाँचिरहेछ त्यो । भीड नाच्छ पहाडको छातीमा तर पहाडले कहिले दुख्यो भनेन । अहिलेको कोरोना त्रासद भीडबाट उभिएको श्रापित समय हो, यसले मानिसहरूका सपनाहरू निलिरहेछ ।
म एक्लै छु । मलार्ई छोएर भाग्ने त्यो हावा एक्लै छ । भीरमा फुलेको गुराँस एक्लै छ । बाहिरको त्यो रात पनि एक्लै छ । मेरो हातमा थुनिएको कलम एक्लै छ । श्वास प्रश्वास एक्लै गरिरहेछ भित्रबाहिर । म जीवित छु । ज्युँदो हुनेहरू एक्लैले सङ्घर्ष गर्छन् । भीड त लासलार्ई मात्रै चाहिन्छ । हिजो धरहरा एक्लै बाँचेको थियो र एक्लै ढल्यो । ऊ ढल्दा ऊसँग ढले कैयौँ एक्लाहरू । म पनि हिजो ढलेको धरहराजस्तै हुँ एक्लो सत्य ।
इतिहासमा सत्यहरू पुरिए पनि कालान्तरमा ती पिपलुजस्तै फेरिफेरि उम्रन्छन । तिमी एक्लो हुनुलार्ई नदीले छोडेर गएको बगर भन्छ्यौ तर म एक्लो हुनुलार्ई कालीगण्डकीले कुँदेको शालिग्राम भन्छु । म छु । एक्लो छु । मसित सिर्फ मै छु अनि मैले गाउने गीत छ र त्यसलाई मैले कहिले एक्लो हुन दिएको छैन । गीतहरू जुन दिन एक्ला हुन्छन् ती नारायणगोपालका ओठहरूबाट जूनकीरी भएर गुन्जिनेछन् मुटुका लयहरूबाट ।
तिमी एक्लो हुनुलाई अभिशाप भन्छ्यौ तर म भन्छु एक्लो हुनु सिर्जनात्मक हुनु हो । तिमी एक्लो हुनुलार्ई एकलास भन्छ्यौ तर म भन्छु एक्लो हुनु ईश्वर नजिक पुग्नु हो । तिमी एक्लो हुनुलाई पूर्व जन्मको पाप भन्छ्यौ तर म भन्छु एक्लो हुनु तपस्वी हुनु हो ।
एक्लो हुनु नदीजस्तै सफा हुनु हो । एक्लो हुनु हिमालझैँ स्निग्ध हुनु हो । एक्लो हुनु आफैँमा पारलौकिक परमानुभूति प्राप्त गर्नु हो । एक्लो हुनु सुनकोसी हुनु हो । एक्लो हुनु आकाश हुनु हो । एक्लो हुनु फूल हुनु हो । एक्लो हुनु एक उज्यालो हिमाल हुनु हो । एक्लो हुनु ऋषि हुनु हो । एक्लो हुनु इन्द्रेणी हुनु हो । एक्लो हुनु आकाशमार्गको पन्छी हुनु हो ।
एक्लै हुनु आफू हुनु हो । एक्लो हुनु त मनको आनन्दमा मिसिनु हो । आनन्द एक्लो हुनुमा फक्रिन्छ । एक्लो हुनु त किरण हुनु हो । जुन एक्लै त थियो नि । घाम पनि त एक्लै थियो नि । ती एक्लोमा विविध छन् । ती एक्लोमा विश्वास नजिकै छन् । ती एक्लोमा स्वाभिमानी छन् । एक्लै त डुब्छ घाम क्षितिजमा तर उसले सबको खुसी फर्काउने बाचा लिएर डुब्छ । र आजसम्म ऊ त्यही सतमार्गमा विनासर्त हिँडिरहेछ । हिँडिरहनु उसको कर्तव्य, खै मैले कहिलेदेखिन् घामले आजसम्म बाटो बिराएको । थाहा भएन उसले कसैमाथि विभेद गरेको । थाहा छैन उसले मेरो, तेरो भनेको । थाहा छैन उसले कसैलार्ई चिसो र कसैलार्ई तातो दिएको किनभने ऊ एक्लो छ । एक्लो हुनु निर्मल हुनु हो । एक्लो हुनु विवेकी बन्नु हो । हरेक शब्दका अक्षर एक्ला छन् । हरेक आवाज एक्लै ध्वनित हुन्छन् । जङ्गली रुख पनि त एक्लै छ । खै कहिले बिस्र्यो र उसले एकान्तमा हावासँग मिलेर गीत गाउनलार्ई । जङ्गलका चराहरू पनि एक्लै छन् । खै कहिले बिर्सेर तिनले वसन्तमा गीत गाउन ।
तिमी एक्लो हुनुलार्ई कोही नभएको सहाराहीन भन्छ्यौ तर म भन्छु एक्लो हुनु जीवनको लयसँग, जीवनको सुरसँग, जीवनको सङ्गीतसँग मिल्नु हो । जीवन त एक्लोमा कति मीठो छ । कसैले छोइदिएर बिटुल्याइदिएको फूल त भैँमा खस्न सक्छ नि कुनै दिन । एकै सुर, एकै स्वर, एकै ताल आहा ! यसको मेलोडी । आहा ! यसको कम्पन । आहा यसको मूच्र्छना । वैशाखमा कतै पर गाइरहेकी कोइली पनि एक्लै त छे नि ! तर परपरसम्म ऊ आफ्नो मृदुलित झन्कार फैलाइरहिछे ।
संसार हेर्ने हाम्रा दुई आँखा पनि एक्लाएक्लै त छन् । के ती दुईको कहिले भेट भएको देखेकी छ्यौ र ? एक्लै त छ आँखा तर एक्लोमा उसले सदा नयाँनयाँ संसार देखायो । दुई किन हुनुपर्ने ? म जन्मिएको एक्लै हो । तिमी जन्मिएको एक्लै हो अनि आमा, जसले हामीलार्ई जन्माइन्, तिनी पनि त एक्ली थिइन् । एक्लै थिइन् तिनी, जतिबेला तिनलाई सुत्केरीव्यथा लागेको थियो । तिमी गर्भभित्र एक्लै त थियौ नि ! साथमा न तिम्रो दाइ थिए, न तिम्री बहिनी थिइन् । गर्भको खोलभित्र त तिमी एक्लै थियौ । सास लिँदा पनि एक्लै र सास छोडेर जाँदा पनि एक्लो त हो नि मनुष्य । यस चेतनाको चैतन्य चोलामा खोइ कसले पायो र साथ कालन्तरसम्म ।
भीड त मलार्ई यति घातक लाग्छ कि भीडमा मान्छे पशुजस्तै अवचेतनमा हुन्छ । भीडभित्र लाज छोपिँदैन । यस संसारको आविष्कार र प्रगति कुनै भीडले बनाएको होइन । यो प्रगति एकान्तले बनाएको हो । यो वैभवता एकान्तले जन्माएको हो । एक्लोले बनाएको हो यो दुनियाँ । किनभने एक्लोमा चिन्तनले चीर नवीनता पाएको हुन्छ । आइस्टाइन एक्लै त थिए नि । भारतकी रत्न लता मङ्गेशकर एक्ली त छिन् नि ! तिब्बत स्वतन्त्रताका गीतकार दलाई लामा एक्लो त छन् । बुद्ध एक्लैले त ल्याए शान्तिको धारा यो विश्वविभुमा र आजपर्यन्त त्यही शान्तिगीत गुन्जिरहेछ पृथ्वीको आधा पाटोमा ।
ग्राहमवेलले टेलिफोनको ध्वनि सिर्जना गर्दा एक्लै थिए । संसारलाई हसाउने चार्ली च्यापलिनसँग अर्को को गाँसिएको थियो र ? एक्लैले हँसाए यस दुनियाँलार्ई । म हेर्छु कहिलेकाहीँ आकाशमा अनि देख्छु चन्द्रमा एक्लो । खुसी लाग्छ यो एक्लैले यत्रो सन्सारलाई मीठो शान्ति र शीतलता बाँडिरहेछ । आज कोरोनाले मलार्ई एकान्त रोज्न बाध्य बनायो । मलार्ई म बुझ्न सिकायो । मलार्ई भीडदेखि पृथक रहेर बाँच्न सिकायो । कोरोना नआएको भए, म यो अनुभूति लेिख्थँनथेँ होला । कोरोनाले मलार्ई एकान्तमा रम्न सिकायो । यो दुनियाँमा लाखौँ मरे । भीडले मरे । भीडको छुवाइले मरे । कुनै वेला छुवाइ पनि यति पीडादायी हुदोरहेछ है ! । कुनै वेला स्पर्श पनि यति घातक हुदोरहेछ । जोडिनु त राम्रो हो भन्दै आएको हो हाम्रो पूर्वीय चिन्तनले तर यतिवेला जोडिनु आफैँमा घातक सिद्ध भएको छ । फरक भएर, एक्लिएर, बेजोडिएर बाँच भन्दैछ यो कोरोनाले । यो शताब्दीको त्रासदीमा मानिसको मन–मस्तिष्कलाई यसले यति धेरै घाइते बनाएको छ कि मानिसको आँखाबाट हत्पती यो हराउने छैन । भीडदेखि परपर भएकाहरू बाँचे । त्यसैले पनि एक्लो हुनु अभिशाप होइन । एक्लो हुनु आरोग्यताको चिन्ह पनि हो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्दैछ, आज विश्वले पनि । मलार्ई म हुनु छ आज अनि मात्रै म भोलि अरूको हुनसक्छु । मलार्ई म हुनु छ आज त्यसपछि मात्रै म भोलि कसैको लागि काम लाग्न सक्ने हुनेछु । आजको यस भीडलाई मैले बिर्सिदिनुछ र भोलिको निर्विकल्प मनुष्यका लागि एउटा जितको कथा सुनाउनु छ मैले कि एक्लो हुनु स्वयं सत्य, शान्ति र स्वस्थ हुनु हो ।
(सिटौला विगत तीन दशकभन्दा अघिदेखि निरन्तर सिर्जना सक्रिय स्रष्टा हुन्)
कवि असल चरित्रका पाँच कविता